Ciidamada ammaanka Galmudug oo toogtey madaxii amniyaadka Al Shabaab ee Gaalkacyo - Awdinle Online
Ciidamada ammaanka Galmudug oo toogtey madaxii amniyaadka Al Shabaab ee Gaalkacyo
Wasaaradda amniga gudaha Galmudug oo soo bandhigtay Aweys Garweyne oo ay ku sheegtay in uu ahaa madaxii sahanka Al Shabaab ee magaalada Gaalkacyo.
Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in ay ciidamada ammaanka toogteen madaxii amniyaadka Al Shabaab ee Gaalkacyo ka dib markii uu dagaalamay.
Axmed Macalin Fiqi Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug oo xalay xili dambe Warbaahinta kula hadlay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka ayaa sheegay in uu ka badbaaday isku day dil oo lala damacsanaa.
Miino nuuca dhajiska ah ee lagu xiro Gawaarida ayuu sheegay in loo adeegsan lahaa khaarijinta lala doonayay, balse waxa uu tilmaamay in Hay’adaha ammaanka ay kahor tageen iyaga oo ka duulaya xog ay heleen.
Magaca ninkaas waxa uu Wasiir Fiqi ku sheegay Aweys Macalin Maxamed Xasan oo la shaqeynayay Nin kale oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Faarax oo ku magac dheer (Xuseen) kana soo jeedo Magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool.
Wasiirka Amniga Galmudug oo waayahaan ku sugan Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in uu ku howlan yahay sameynta isbadal dhanka Amniga ah, waxaana uu wacad ku maray in ay wax ka qaban doonaan cid waliba oo ku howlan arrimahaas.
Previous articleMaxay aheyd in Madaxweyne Farmajo Soo hadal qaado Hadal Jeedintii Shaley?